Kavha Kunyangwe kana denda richipenga, hatigone kumisa kushingairira kwedu kurongedza vatengi.
Pasi pehutungamiriri hwemukuru wewekishopu, ese mapoka evashandi vekupakata vari kuungana nemufaro uye kurongedza. Zvese zvigadzirwa zvinofanirwa kuve zvakasarudzika, kusunganidzwa, mumapaketi, uye kutsigirwa. Kuti uone kunaka kwechigadzirwa, bhokisi rega rega richaratidza kodhi uye packag ...
Pfupiso yeruzivo rwekudzivirira moto uye kudzidziswa kwekuchengetedza
Musi waMay 12th, kambani yedu yakabata dzidziso yekuchengetedza moto ruzivo. Mukupindura ruzivo rwakasiyana-siyana rwekudzimisa moto, mudzidzisi wemoto akaratidza kushandiswa kwezvokudzimisa moto, tambo dzekutiza, magumbeze emoto, nemwenje wemoto. Mudzidzisi wekudzimisa moto akapa tsananguro yakajeka uye yakajeka kubva ku ...
Regulator inoyambira nezve njodzi yeSyils coils mune braking system.
Usatore gadziriro ye2021 Brisbane Truck Show senge inyaya yechokwadi. Hatizoregere kuedza kuti vashanyi vashanyire… + zvimwe Butiro rinozopatsanurwa kubva ku "Nhetembo" nyowani yaMack, uye maBhaibheri akasiyana-siyana parizvino ave misoro yenyaya dze ...
Nhau Dziri Kuitika: 2021 Inotakurika Iron Iron Pipe Fittings Musika Mushumo, Vatambi Vahombe, Mhando, Zvishandiso, Nyika, Saizi yeMusika, Forecast kusvika 2027 (Zvichibva paKupararira kwepasi rose kwe COVID-19 muna 2021) | V ...
Los Angeles, USA: Report Hive nguva pfupi yadarika yakaburitsa mushumo wekutsvaga wakanzi "Global Inotakurika Cast Iron Pipe Fittings Market Research Report 2021 ″. Chirevo ichi chakanyorwa nevanoziva uye vanoziva musika vaongorori uye vaongorori. Iko kusangana kunoshamisa kwezvakakosha zvidzidzo ...
Tiri nyanzvi mugadziri nyore kufurirwa simbi mutopota Fittings mu China, pamwe makore anopfuura makumi matatu mundima iyi. The zvinhu ekisipoti kunyika dzakawanda, dzakadai, United Kingdom, Poland, Russia, Australia, Malaysia, Indonesia, Saudi Arabia etc. Vazhinji mutengi isu takamisa zvakanaka uye refu ...
Makondomu miviri inoshandiswa kuwana mukana wepakati penzira yemuchinjikwa yekudhonza waya, kuongorora uye kugadzirisa uko mujaho unoshandura nzira. Mhando: LB, LL, LR, T. Yakaunganidzwa neKufukidza uye Gasket Zvishandiso: Inotakurika simbi Pamusoro: Zinc Electroplated Saizi: 3 / 4-2 Thread: NPT Kurongedza Mashoko: ...
Air hose coupling inonziwo Claw coupling
Kushanda: Kumanikidzwa kwemhepo kufambisa, kubatanidza pneumatic maturusi uye pneumatic masisitimu, masystem emvura muindasitiri, kunzvimbo dzekuvaka, kurima uye horticulture. Inoenda American Type uye European mhando zvese zvinosanganisa ...
Pipe inosunga fittings
Nyore kufurirwa simbi mutopota okusungisa Fittings anoshandiswa kubatanidza simbi Tubing, akasiyana Ringi yezvinhu zvinogona kusanganiswa neyakajairwa tubing inogonesa vashandisi kugadzira chero chimiro chingafungidzirwa kushandiswa mune ese maindasitiri, senge handrail fittings, masherufu, ekunze mitambo, monkey mabara uye nezvimwe .Inste ...
Iyo 129th Canton Fair Kukoka
Vadiwa Vatengi uye Shamwari, Ndinoshuvira kuti iwe nemhuri yako mugare zvakanaka uye mune hutano. Nekuda kwekuputika kwe COVID-19, iyo 129th Canton Fair ichiri pamutsetse. Katoni Fair ndicho chikuru kuratidzwa mu China. Ndiwo mukana wakanakisa wekuti iwe neni tisangane nekuziva zvakawanda nezve mumwe nemumwe zvebhizinesi kubva 15th ...
Kutsvagisa uye kusimudzira kwekukanda mota
Muna Chikunguru 2020, kambani yedu yakanangana nehunhu hweakavezwa jecha rakavigwa bhokisi kukanda, yakazvimiririra yakatanga yakakosha mota yekukanda, zvakanakira mota yekukanda ndeiyi: ...
Fekitori nyowani yakamiswa
MunaJune 2020, chirimwa chitsva chakawanikwa muJiahe County, Chenzhou City, Hunan Province. Tinoshandisa kuti nzira zvemapuranga jecha goko muforoma Kudzingwa .After rimwe gore tsvakurudzo uye kuvandudzika, kugadzirwa michina iri kuramba kuvandudza. Muitiro yero zvemapuranga ...
Yedu Kambani Yakakunda Iyo Inokudzwa Musoro we "High-Tech Enterprise"
Muna Kubvumbi 2020, kambani yedu yakahwina zita rekuremekedza re "High-tech Enterprise" nekuda kwekuenderera kwekuvandudza kwehunyanzvi hwekugadzira uye yekumberi kwekutsvaga nekusimudzira kugona. Chete mabhizinesi ane yakazvimirira yekutsvaga uye kusimudzira kugona uye epamusoro tekinoroji nhanho ...
Kurumidza Kuburitsa Hose Couplings, Plastiki Mvura Pipe Fittings, Chitubu Tube Clamp, Bsp Pipe Fittings, Kukodzera, Aluminium Pipe Fittings,
Kavha Kunyange kana denda iri ragi ...
Pasi peutungamiri hwewekishopu supe ...
Pfupiso yeruzivo rwekudzivirira moto uye ...
Musi waMay 12th, kambani yedu yakabata moto prot ...